Indlela Whisky Irish is Made? A Beginners Guide
is nogologo Irish wenza kanjani?
is nogologo Irish wenza kanjani? Ingabe nawe kakade? Uma kunjalo, lesi sihloko hhayi okuhloswe ngempela wena. Kunalokho, Ngibhalela lona bonke abantu abangamazi, ngubani ungathanda ukwazi kodwa bayesaba ukubuza njengoba bacabanga ukuthi kungcono into wonke umuntu uyazi!
Ayikho into efana umbuzo silly ngakho sinalokho engqondweni, Ngizokwenza konke okusemandleni ami ukuze ubhale kwencwadi elula Wabasaqalayo demystifying kanjani Whisky Irish senziwa.
Irish Whiskey yokusanhlamvu. Milling futhi Malting
zona, okufushane silula ukuthi malted futhi ngezinye izikhathi ezinye un-malted Grain Irish (ngokuvamile, kodwa ngaso sonke isikhathi ibhali) ingumhlabathi amaqhafuqhafu ibe ufulawa Yiqiniso ngokuthi grist. okusanhlamvu Malted amabele esiye oswakanyiswe izinsuku ezimbalwa ukukhohlisa ukolweni ukuhluma okuyinto inchubo lapho ukukhishwa okusanhlamvu enzyme ukuqala ekuguqulweni isitashi ku wokusanhlamvu ushukela.
Uma ukuhluma yaqalisa, it is ngokushesha Washweba yayo by ngokushesha iphele okusanhlamvu malted e kuhhonela esikhulu avaliwe lapho umusi souce ukushisa manje igesi yemvelo (ngaphambili yamalahle / anthracite) engalokothi enze ukuxhumana ibhali malted . Okusanhlamvu malted esetshenziselwa Scotch nogologo ngokuvamile omisiwe ngokuqondile umusi Turf noma Peat imililo. Ekwenziweni yendabuko nogologo Irish, kungekho intuthu yenza ukuxhumana okusanhlamvu yingakho nogologo Irish akanayo nephunga peaty futhi ukunambitheka elihlobene ne eziningi Scotch whiskeys. Eminyakeni yamuva nje kuye kwaba whiskeys peated eyenziwe Ireland ezifana Connemara, kodwa lezi ngokuvamile ezimweni eziyivelakancane ishintshe.
Mashing futhi Ukuvutshelwa
I grist zomhlabathi malted noma okusanhlamvu malted futhi unmalted is wabe esenezela ukusula amanzi Irish futhi eliwu cishe 60 degrees C. Lokhu yakha lwamanzi, isobho okunoshukela njengoba amanzi ashisayo kanye enzyme kule malted okusanhlamvu Ukukhululwa okuqukethwe ushukela isitashi e okusanhlamvu ochotshoziwe. Ngemva kwamahora ambalwa, isobho, eyaziwa ngokuthi Mash ovunyelwe kuphole futhi uketshezi elicwengekileyo akhanywa. Abanye abanye imvubelo yengezwe ketshezi okunoshukela engasekelwa eyaziwa ngokuthi wort. Imvubelo kubangela inhlama ukuba froth futhi bubble njengoba Ishintsha okuqukethwe kukashukela ube utshwala. Ngemva kwezinsuku ezimbili noma ezintathu, zonke ushukela iguqulelwe ngu imvubelo kanye froth uyafa phansi ukushiya efudumele efana, ubhiya like impahla mayelana 8% utshwala by volume (ABV) ebizwa ngokuthi Geza.
Mashing okukhishwe ushukela kokusanhlamvu, ngaphambi sifaka imvubelo ukuguqula ushukela ubhiya.
Ziphuzo zazihluzwa ku ecacile Irish Whiskey uMoya
Lokhu ukugeza ke distilled futhi esinamandla futhi izikhathi ezimbili noma ezintathu enhlokweni noma ebhodweni zethusi namanje noma ikholomu okuqhubekayo namanje ibe vodka ecacile like entsha umoya ukwakheka nogologo nge ABV ka mayelana 85%. Kuphela inhliziyo noma isikhungo ingxenye ngayinye run ziphuzo zazihluzwa uya phambili eyesibili neyesithathu ziphuzo zazihluzwa esiteji. I isiqalo nesiphetho ngamunye run ziphuzo zazihluzwa eyaziwa njengoba amakhanda kanye imisila ifakwa eceleni futhi recirculated libuyiselwa namanje kusukela bafika lapho. Lokhu kuyasiza ekulondolozeni ukungaguquguquki waqina futhi ukunambitheka kusuka ngamunye webhodwe isasetshenziswa. Ngokuvamile ingxenye yokuqala yaleli amakhanda ukusebenzisa kuyinto di ngefilakisi njengoba kuzoba ziqukethe ezinye compounds engadingeki futhi singathandeki.
Nokuvuthwa ku Whisky Irish
Lo moya nogologo ke buhlanjululwe ngamanzi acwebileyo phansi mayelana 65% ngaphambi kokuba kugcwaliswe emiphongolweni ye-oki okungenani 3 iminyaka ukuba kancane abavuthiwe phakathi Whisky Irish. Uhlobo izinkuni imiphongolo kanye nokusetshenziswa yabo owedlule uma ikhona, neqhaza ngendlela enkulu uhlamvu, umbala, ekhaleni nomuzwa wezinkulumo nogologo entsha.
Bottling Ukudayiswa njengoba Whisky Irish
Ngemva ukuguga okungenani 3 kodwa ngokuvamile kuze kube 20 iminyaka, the ukuvuthwa nogologo Irish uyaphinda buhlanjululwe ngamanzi acwebileyo Irish phansi amandla zokuphuza mayelana 40% ABV ngaphambi kokuba bevalela zokusabalalisa nokudayiswa. Ngezinye izikhathi nogologo ekhethekile ishiywa ngesikhathi "Cask Amandla" of 50% ukuze 60% ukwethula isiphuzo kancane lwenkomo olufakwe amanzi futhi flavoursome ngaphezulu kodwa kunamandla aficionados. Lezi amandla cask Whiskeys Irish ngokuvamile abanconywa ngokuba Irish Whiskey Wabasaqalayo abayobe cishe uwathole phezu powering, ezibizayo futhi kunzima ukuba baphuze ngenxa okuqukethwe kwabo ephakeme utshwala.
I Ukuqala Irish yakho Whisky Journey
Ngakho, khona unayo it! Engeza ochotshoziwe okusanhlamvu malted emanzini. Shisisa it up ukukhulula ushukela. Engeza imvubelo lwalungabola futhi ukuguqula lona ubhiya. Awathele ubhiya ku ecacile Irish nogologo umoya kanye nobudala noma abavuthiwe umoya oki imiphongolo okungenani 3 iminyaka ukwenza nogologo Irish!
Lo moya nogologo is babe sebebeka emiphongolweni ye-oki ukuze okungenani 3 iminyaka ukuvuthwa ku whiskey. The eside echitha e imiphongolo, lo mnyama umbala umlingisi kakhudlwana futhi ukunambitheka ke uzuza.
Simple? Awu, yebo nangokuthi cha. Whisky luyinhlanganisela okusanhlamvu, amanzi, amandla, ukhuni nesikhathi. Kodwa kunokwehluka futhi ezicashile e ngasinye salezi zici ezenza zonke whiskeys Irish esiyingqayizivele.
Ukwazi kancane okwengeziwe izakhi ezahlukene ukuthi kwenziwa nogologo Irish ngeke ngempela ake nawe uyasazisa isithakazelo futhi baqonde ngempela kalula futhi ngokushesha lapho sonke ebukeka ehlukahlukene, amakhala, ukunambitheka namaphunga mouthfeels lwezinhlobo ezahlukene nogologo Irish zivela. Lokhu kancane yolwazi okuyobabulala ujike nogologo Irish kusuka okuthile uphuza into ungakwazi bayangithanda futhi nazo zonke ezinye empilweni yakho.
Ngakho izihloko ezimbalwa ezizayo, Ngizobuya ukubhekana ngalinye kulawa izigaba e Irish Whiskey ekwenziweni ngokuningiliziwe okuningi. Ungakhathazeki! Ngizoqala sikuphi ushiye lapha Irish nogologo Wabasaqalayo kuzokusa eminye kanye uhambo usuphokophele Irish Whiskey aficionado njengami!